Nzipu ozi - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Rịba ama tupu iji:
(1) Akụkụ gụnyere: Modulu LED, eriri mgbaama n’etiti modulu, eriri ike n’etiti modul na ike ya.
(2) Zụta modulu nke otu ogbe: iji zere nchapụta na agba dị iche na otu ihuenyo, ị ga-azụrịrịrị modulu nke otu ogbe ahụ. Nke ahụ bụ, ị ga-azụrịrịrị modulu maka otu ihuenyo site na otu usoro site n'aka anyị.
(3) Kpachara anya: Anyị ikanam modul enweghị ike a ga-eji dị ka akụkụ ahụ mapụtara nke gị ẹdude ochie ikanam ngosi. Anyị enyela nkwado ma ọ bụ ọrụ aka ma ọ bụrụ na ị jiri modulu LED anyị dochie modulu LED dị ochie.
(4) Tarifu: ọnụahịa anyị anaghị agụnye tarifu ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla na ebe ị na-aga, ị kwesịrị ị na-ebubata ụzọ mbata omenala ma kwụọ ụgwọ ọnụahịa ma ọ bụ ọrụ niile na mpaghara.
1. Ọnụ ego nke ihe anaghị etinye ego mbufe. Nwere ike ịlele ọnụahịa mbufe na peeji ịzụ ahịa mgbe ị họrọ ọtụtụ ihe na ebe ị na-aga.
2.DHL awara awara bụ usoro ndabara. Ndị ọzọ dị ka EMS, UPS, FedEX na TNT ga-anabata naanị mgbe DHL adịghị ma ọ bụ na ọ gaghị adabara ebe a na-aga; Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbuga ngwongwo ahụ n'oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku, biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa.
3. Anyị ga-aga n'ihu na iwu gị n'ime ụbọchị 2 na-arụ ọrụ mgbe ị na-akwụ ụgwọ. Anyị ga-agwa gị oge ọzọ ị ga-ebu ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ngwongwo adịkwaghị.
4. Naanị anyị na-ebuga adreesị akwadoro maka iwu ahụ. Ya mere, adreesị gị ga-adakọrịrị adreesị mbupu. Biko gosi adreesị nnyefe na akaụntụ gị mgbe Wester Union ma ọ bụ ndị ọzọ kwụrụ ụgwọ.
5. N'ụzọ na-ebugharị oge nke mbupu nyere site na ụgbọelu na ewepu ngwụsị izu na ezumike. Oge njem nwere ike ịdị iche, ọkachasị n'oge oge ezumike.
6. Biko gwa anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbelata ọnụahịa ngwaahịa na akwụkwọ ọnụahịa mbupu iji zere ma ọ bụ belata mbupụ ọrụ dị n'akụkụ gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-eji ego ole ahụ akwụ ụgwọ.
7. Ọ bụrụ na achọrọ, biko nyere onye ozi ahụ aka maka enyemaka dị mkpa gbasara nhichapụ ngwongwo nke ngwongwo na mpaghara gị.
8. Biko lelee ihe ndị ahụ n’ihu onye ozi mgbe ha rutere. Ọ bụrụ na e mebiri ngwongwo ahụ, biko gbalịa inweta ihe ndekọ ederede ndị ozi mpaghara maka mmebi ahụ, ka ọ dị ugbu a, biko zitere anyị foto ma ọ bụ vidiyo nke nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa ozugbo enwere ike.
9. Ọ bụrụ na ịnabataghị mbupu gị n'ime ụbọchị 15 kemgbe ụbọchị ịkwụ ụgwọ, biko kpọtụrụ anyị. Anyị ga-achọpụta mbupu ahụ ma laghachikwute gị ASAP.
10. Ngwaahịa ndị enyere iwu agaghị enwe obi ụtọ na nloghachi na akwụkwọ ikike ma ọ bụrụ na emebi koodu ha.
11. Anyị na-enye akwụkwọ ikike dị mma nke afọ abụọ maka ọtụtụ ngwaahịa anyị rere (okwu pụrụ iche dabere na akwụkwọ ọnụahịa ikpeazụ Proforma.).Ọ bụrụ na enwere ntụpọ ọ bụla n'okpuru iji ya n'oge a, anyị ga-edozi ma ọ bụ dochie n'efu na ụlọ ọrụ anyị. Ndị ahịa na-ahụ maka mbupu.